Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds 1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds includesavery good collection of HD backgrounds that are inspired by artistic objects and items near you.
သငျသညျ Puppy နောက်ခံပုံများတဲ့ပန်ကာရှိပါသလား Display ကိုအဘို့အကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနုပညာနံရံများနှင့်အတူအလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနောက်ခံပုံများရှာဖွေနေပါသလား အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်အရောင်များနှင့်အတူနောက်ခံပုံများဖြစ်ကြောင်းထိပ်တန်းအနုပညာနောက်ခံပုံများခံစားရသည်။ ဤရွေ့ကားတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုကြည့်ဖို့အပျြောအပါးစေတဲ့အလွန်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရိပ်ကိုရှိသည်။
အခမဲ့ APP ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ -PREMIUM Wall
-4K AND 8K Wallpaper
Wallpaper ၏ -AVERAGE SIZE - 7MB / 700DPI
-HDR နောက်ခံများ (မကြာမီလာတော့မည်)
1080x1920 px (Full HD ကို 1080p) နှင့် 2160x3840 px (Ultra HD 4K S8 မှာ Plus အား): ကြီးမားသောဖန်သားပြင်နှင့်အတူ devices များအပါအဝင်မည်သည့်ကိရိယာ -Supports ။
👉 / ပြန်လည်သုံးသပ်👍ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့သတိရပါ ကျေးဇူးပြု. 🙏🙏🙏
သည် "Puppy နောက်ခံများ 4K PRO Puppy background" နှင့်အတူ, သင်အနည်းငယ်မျှသာအရာဝတ္ထုနောက်ခံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနေ့စဉ်အသစ်ကြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ဤ HD ကိုနောက်ခံ browse ပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာတချို့နောက်ခံ bookmark နိုင်အောင်အကြိုက်ဆုံးရှေးခယျြနိုငျသာ။
Puppy နောက်ခံများ 4K PRO Puppy နောကျခံ သင်အနီးအနုပညာတ္ထုများနှင့်ပစ္စည်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းဖြစ်ကြောင်း HD ကိုနောက်ခံ၏အလွန်ကောင်းသောစုဆောင်းခြင်းပါဝင်သည်။
သင် Puppy နောက်ခံတစ်ဦးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်သင်ဖုန်းကိုက "Puppy နောက်ခံများ 4K PRO Puppy background" app ကိုမှသည်အရည်အသွေးမြင့်မားအနည်းငယ်မျှသာနောက်ခံပုံများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနေ့စဉ်ကြည့်ရှုစေနိုင်အောင်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင် HD မှာကဤအနည်းငယ်မျှသာနောက်ခံပုံများရှိသည်ဖို့ကိုချစ်စေခြင်းငှါ, ။
ဤ "Puppy နောက်ခံများ 4K PRO Puppy background" app ကိုရောင်းချရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း ထိပ် Puppy နောက်ခံပုံများနှင့်အတူဖုန်းဝေါလ်ပေပါကိုစိတ်ကြိုက်အားဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုသစ်တစ်ခုကြည့်နေ့တိုင်းပေးပါ။
ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေးကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်, အကြံပြုချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်ရှာကြ၏။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်မွမ်းမံမှုများဆောင်ကြဉ်းဆက်လက်နိုင်အောင်, "motionwallpapers@gmail.com" မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှောင်မိုက် Puppy နောက်ခံများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
တစ်ဦးကခွေးကလေးတစ်ဦးလူငယ်ခွေးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့သူတွေကို 7-11 ကီလိုဂရမ် (15-23 ပေါင်) အထိအလေးချိန်နိုင်ပါတယ်စဉ်တချို့ကခွေးပေါက်စ, 1-1.5 ကီလိုဂရမ် (1-3 ပေါင်) အလေးချိန်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကျန်းကျန်းမာမာခွေးပေါက်စကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်လျင်မြန်စွာမပေါက်ပါဘူး။ လေ့ထိုကဲ့သို့သော Yorkshire Terriers အဖြစ်ဝတ်ရည်တွင်တွေ့မြင်နေသည်အဖြစ်ခွေးကလေး, အဟောင်းတွေကြီးထွားလာအဖြစ်တစ်ဦးကခွေးကလေးရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအရောင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ pup မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဖျံ, သစ်ကုလားအုတ်, guinea ဝက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကြွက်သို့မဟုတ်ငါးမန်းကဲ့သို့သောအခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ကြပါစေယင်းအင်္ဂလိပ်မှာတော့ခွေးကလေး, ခွေးဖို့အထူးရည်ညွှန်းသည်။
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds အား အခ်က္ျပပါ
koogan စတိုး 27 15.04k
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Motion Wallpapers
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.amoledwallpapers.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: E4:C5:9C:20:A1:9C:28:7F:A9:DD:1F:7B:16:18:82:DD:7D:47:C8:70
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Aneesh Pradeep
အဖွဲ့အစည်း (O): Aneesh Pradeep
နယ်မြေ (L): Aktobe
နိုင်ငံ (C): KZ
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Aktobe
Puppy Wallpapers 4K PRO Puppy Backgrounds APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ